के को डर नेपालमा हैन त ? शक्ती त बन्दुकबाट निसक्नछ नि! पहिला जनता त्यस माथी कानुन अनि त्यस माथि बन्दुक कसो? रगताम्मय भएको बन्दुक लिएर माओबादी सिहंदरबार छिरे। रोस्टममा सांसद बोलीरहंदा कमरेडको झोलामा बन्दुक जागा बस्दथ्यो। अब त्यस्ता बन्दुकका नाइके कती कती, गनेर साध्य छैन।
त्रिपुरेश्वेरमा बम पड्के एउटा नाइके जन्मिन्छ, बारामा मान्छे मरे अर्को नाइके जन्मिन्छ। रगतको के मतलब, बन्दुकवालको पो चासो,कुन दिन ति पनि टुप्लुक्क सिंहदरबार गेटमा आइपुग्छन। लोकतन्त्र आयो हर्कमान, गोली चल्यो थर्कमान, यस्तै यस्तै छ नेपालमा आज। जस्तो बाउ त्यस्तै छोरो भने जस्तो अहिले चलेको बन्दुको राजले आउदो पुस्ता आकर्षित नहोला त ? टि.भीमा हुनमान देख्दा त परालको पुछार बनाएर आगो दन्काउदै हिड्ने केटा केटी देशमै फिल्म चलेको बेलामा किन चुप्प बस्दथे। पुल्चोकको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट डेढ लाख नगद लुटेर यसको सुरुबात गरेछन एक १० बर्षे बालकले ।